महिनावा,री भएको बेला शारी,रिक सुम्पर्क गर्न हुन्छकी हुदैन ? यसो भन्छन् चर्चित चिकित्सक – Gazabkonews
महिनावा,री भएको बेला शारी,रिक सुम्पर्क गर्न हुन्छकी हुदैन ? यसो भन्छन् चर्चित चिकित्सक
धेरै महिला पुरुषहरुमा महिनावा,री अर्थात मिन्स भएको बेला शारी,रिक सम्पर्क गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने बारेमा जिज्ञासा रहने गरेको छ । तर यसका बारेमा वैज्ञानिकहरुले भने फरक धारणा सार्वजनिक गरेका छन् । उनीहरुले गरेको अधययन अनुसार महिनावा,रीको बेलामा शारी,रिक स’म्पर्क गर्न मिल्छ । तर, सुरक्षित सम्पर्कमा ध्यान पुर्याउनुपर्छ । क,न्ड,म लगाएर शारी,रिक सम्पर्क गरेमा सं,क्र,मणबाट बच्न सकिन्छ ।
महिनावा,री सुरु हुँदा, प्रोजेस्ट्रोन भन्ने होर्मोनेले गर्दा पा,ठेघरमा कन्ट्रयाक्सन सुरु गराउँछ जसले गर्दा पा,ठेघरबाट रगतसहित अरु पदार्थहरू महिनावा,रीको रूपमा बाहिर निस्कछ । महिनावा,रीको बेला स,म्पर्क गर्दा, चर,मसुखको बेला पा,ठेघरमा कन्ट्रयाक्सन हुन्छ, जसले गर्दा, स,म्भो,गपछि अरु पदार्थसहित रगत अलि बढी बग्नसक्छ । र महिनावा,रीको समयावधिलाई पनि कम गर्छ ।तसर्थ महिनावा,री हुदा सुरक्षित तरिकाले स,म्पर्क गर्दा कुनै हानी नहुने चिकित्सकको राय रहेको छ